Iimfihlo zosasazo ngqo lwe'Simpsons '| Izidalwa ezikwi-Intanethi
'Iisimpson' zisebenzise njani iAdobe Character Animator ukusasaza umboniso bukhoma
Xa kusasazwa inkqubo ye- "The Simpsons", abaninzi bazibuza ingafezekiswa njani. Kodwa konke oko kungenxa yokusetyenziswa kwenkqubo eyayiphuhlisela ukuvumelanisa imilebe kunye noopopayi abasebenza ngundoqo.
Inkqubo yayiyiAdobe Character Animator kwaye uthathe ithuba lobuchule belizwi likaDan Castellaneta ekuphuculeni ukumilisela le mizuzu mithathu ihlala apho uHomer azichaze khona ngokugqibeleleyo ngazo zonke iintlobo zeenkcukacha, kubandakanya nexesha lakhe elithile ngokuqhwanyaza kwamehlo akhe.
Umbono uvela kwicandelo lezemidlalo likaFox, elithi iphumeze ubuqhetseba obuphilayo kwirobhothi yakho yezilwanyana uCleatus. Oko kwabakhokelela ekubeni baphande ngamathuba eAdobe Character Animator. Kunjalo nje, Sele sithethile ngale nkqubo ngelo xesha.
Le nkqubo yile yenzelwe ukukhulisa oonobumba be-2D kwi-Photoshop CC o Umzekeliso ngokudlulisela iintshukumo zokwenyani zomntu ngendlela yoopopayi. Oku kunokwenziwa ngokucinezela amaqhosha athile, kodwa apho ubuxoki bomlingo busesandleni sokuzisa imbonakalo yobuso bomsebenzisi wekhamera yewebhu kwi-2D yomlinganiswa ohambelana nomlomo omkhulu kwincoko yababini.
Inxalenye yomlomo wokuvumelanisa lwenziwa ngokuhlalutya igalelo lesandi kwaye uyiguqulele kuthotho lweefonim. Oku kuthetha ukuba umlomo unokuphiliswa ngokuthetha ngqo kwimakrofoni. Into ebalulekileyo kulungelelwaniso ukuze ibe yimpumelelo.
Ukusebenza ngoku kwafuneka irekhodwe kabini kubabukeli bonxweme olusentshona nasempuma. Umlingisi welizwi uCastellaneta wasiwa kwisitudiyo esingenasandi ngelixa uDavid Silverman, umlawuli kunye nomvelisi weeSimpsons, wayephethe ekusebenziseni oopopayi abongezelelweyo ngekhibhodi yesiqhelo yeXKEYS ebandakanya oopopayi abaprintiweyo bakaHomer. I-Adobe ikwaphumeze indlela yokuthumela iziphumo kwiCompact Animator ngokuthe ngqo njengophawu lwevidiyo olwenza ukusasaza ngqo.
Ukuba uDavid Silverman wabekwa ekulawuleni amaqhosha, kungenxa yokuqhelana kwakhe noopopayi, ngaphandle kokuba ebizwa ngegama lengcali yehomere.
Okokugqibela bathetha noHomer, yonke intshukumo yomlomo yencoko yababini, ubume begumbi kunye noopopayi bakaHomer bewangawangisa iingalo zakhe, beqhwanyaza amehlo, njalo njalo. UEric Ekugqibeleni uKurland wadibanisa yonke into ukuyilungiselela umboniso ophilayo.
Kubuzwe uSilverman ukuba woyike ngexesha losasazo phila, kodwa watsho ukuba nangaliphi na ixesha, kodwa wayexhalabile ngakumbi malunga nendlela abanye abanokuba nexhala ngayo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » 'Iisimpson' zisebenzise njani iAdobe Character Animator ukusasaza umboniso bukhoma
Iakhawunti ye-Twitter yabelana ngemibala yeephalethi zemiboniso bhanyabhanya
Ukusikwa okumangalisayo kuka-Eiko Ojala ngamaphepha kunye nezithunzi